Huami Amazfit Smartwatch, ihe Xiaomi na-esighi na Xiaomi | Akụkọ akụrụngwa
Huami Amazfit Smartwatch, ihe eji ejiji Xiaomi nke esighi na Xiaomi
Ọbịbịa nke Xiaomi na-abata elekere anya eleela anya kemgbe ogologo oge ma n'ehihie a anyị hụrụ ọkwa gọọmentị ya na-enweghị ọkwa. Eziokwu bụ na anyị enweghị ike ịsị na ọ bụ mmalite nke Xiaomi dịka nke a, ebe ọ bụ na nche na-abịa n'okpuru mbinye aka Huami, nke maka ndị niile na-amaghị ya anyị ga-agwa gị na ọ bụ Xiaomi sub-brand. Yabụ n'ezie, na nke Xiaomi nwere, ụlọ ọrụ China anaghị etinye akara ya mana o doro anya na elekere ahụ bụ nke ya. N'aka nke ọzọ, kwuo na Huami ebuputala smartband na mbụ, yabụ na ọ bụghị nke mbụ ebuputara n'okpuru akara a na mgbe niile ịmara na ọ dị n'okpuru nche anwụ Xiaomi.
Nkọwa nke elekere ọhụụ a bụ ihe na-atọ ụtọ ma anyị chọpụtara na nwere 28nm GPS wuru n'ime ya nke ga-enye anyị data ziri ezi maka ndị anyị na-achọ igwu egwuregwu. N'aka nke ọzọ anyị na-ahụ na ọ nwere a 1.34 anụ ọhịa ihuenyo na 300 x 300 pikselụ mkpebi, ihe nhazi na ọsọ nke 1.2 GHz, ihe mmetụta ụda obi, na-enye nguzogide mmiri na uzuzu nke IP57 kwadoro ma nwee batrị 200 mAh nke, dị ka onye nrụpụta si kwuo, ga-enye anyị ụbọchị ise eji.
Mgbaaka ndị a nwere ike dochie anya ma eziokwu bụ na imewe ahụ mara ezigbo mma ma ọ dị ka ọ buru oke ibu na nke mbụ. Enwere ike gbanwee eriri dị ka elekere Apple na o nwere bezel nke ga-echebe ihuenyo ahụ site na nsị nwere ike.
Ya mere, anyị ga-ekwu na elekere a sitere na Xiaomi n'agbanyeghị na ọ nweghị akara edere akara a, yabụ na anyị agaghị ahụ ya maka ọrịre n'ọchịchị na akụkụ ndị a, n'agbanyeghị na echi bụ ụbọchị mmalite ya na China. Pricegwọ ya ruru $ 120 ị ga-achọ otu n'ime ọtụtụ azụmahịa e-commerce nke e nwere taa iji nweta otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Huami Amazfit Smartwatch, ihe eji ejiji Xiaomi nke esighi na Xiaomi
IPhone 7 na iPhone 7 Plus ga-adị na agba 5 dị iche iche
Apple egwu Europe mgbe EU nyere iwu nke 13.000 nde